Ona iyo mukati meimwe nhandare uye nzvimbo dzekutenga dzave kuwanikwa muApple Mepu iOS 11 | IPhone nhau
Kuona mukati meimwe nhandare uye nzvimbo dzekutenga zvave kuwanikwa muIOS 11 Apple Mepu
Iyi yaive imwe yenyaya dzakaburitswa panguva yekutaura kweApple kuMcEnery Convention Center muSan Jose, muna Chikumi 5 uye mune ino yechipiri beta vhezheni yakatangwa naApple, vagadziri vatove nebasa iri rinotitendera kuti tizvione nekuzviisa munzvimbo mukati memahofisi enhandare, zvivakwa zvakakosha uye nzvimbo dzekutenga. Craig Federighi pachake, aive mutungamiri wekupa nhau munhau huru achisiya kuona kwemukati kunowanikwa paApple Mepu mumaguta akaita seAmsterdam, Berlin, Boston, Chicago, London, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Tokyo, Toronto neWashington DC.
Asi panguva ino zvinongoratidzika zvakarongedzwa mune zvimwe zvezvivakwa zvakakosha muUnited States uye nevakagadziri, zviri izvo zviri mu yechipiri beta vhezheni yeIOS 11, saka usamhanye kuti upinde Mamepu kana iwe uri padyo kana mukati mechitoro, nhandare, nezvimwewo, kuSpain nekuti haisi kuwanikwa panguva ino. Chokwadi ivo vanopedzisira vozviisa mumaguta makuru seMadrid kana Barcelona, ​​asi hapana nhau nezvazvo.
Idzi ndidzo nhandare kuti ivo vane iri basa rinowanikwa uye kuti rinogona kuuya rinobatsira kana tichifamba kuti tizive zvemukati meizvi uye tikwanise kufamba pasina matambudziko, netarisiro ivo vachawedzera mamwe akawanda:
Vagadziri vanogona kuwana aya mepu emepu kana vangove padyo nechivako, ivo vanongowana iyo yeMapp application uye izvi icharatidza sarudzo Ona mukati. Kubva panguva iyoyo ivo vanozokwanisa kufamba kubva kunyorera mukati meyakavharirwa uye nekuona nzvimbo dzekufarira. Zvinogoneka kuti mamepu emukati ezvivakwa zvikuru zveveruzhinji, nhandare huru nedzimwe achaitwa zvishoma nezvishoma mushanduro nyowani yeIOS 11. Zvino ndidzo chete dzinotanga kuoneka ndidzo dzatambotaura pakutanga, saka isu unofanirwa kuvarwere zvakare uye kumirira kuti isvike kuSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kuona mukati meimwe nhandare uye nzvimbo dzekutenga zvave kuwanikwa muIOS 11 Apple Mepu
KeenLab inotiratidza demo reJailbreak yeIOS 10.3.2